Internet cafe မှာသုံးတဲ့ networking စနစ်ကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး — MYSTERY ZILLION
Internet cafe မှာသုံးတဲ့ networking စနစ်ကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး
ကျွန်တော်က အင်တာနက်နဲ့ပက်သက်ပြီး တကယ်နည်းလမ်းတကျနဲ့ သင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ....
စိတ်ပါ၀င်စားလို့ လေ့လာရင်းနဲ့ဘဲ အခုလောက်လုပ်တတ်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
ကျွန်တော်မသိနားမလည်သေးတာတွေကိုလဲ စိတ်ရှည်သည်းခံ စွာဖြင့် ပြန်လည်ရှင်းပြသင်ကြားကူညီကြစေလိုပါတယ် ....
ကျွန်တော့်ဆီမှာ ဂျီတော့ကနေ private cam လိုမျိုးဗိုင်းရပ်စ်၀င်ရောက်ခဲ့ရင် ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ဆော့၀်ကိုထည့်သွင်းထားချင်နေပါတယ်
ရှာလို့လဲမတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်... ဒီထဲမှာလဲ ရှာကြည့်ပါတယ်... ကျွန်တော်ဘဲမရှာတတ်လို့လဲမသိဘူး.. မတွေ့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်....
ဖြစ်နိုင်ရင် clear private cam ဆော့၀်လေးကိုပေးကြစေလိုပါတယ်....
နောက်တခု က ကျွန်တော့်အင်တာနက်ကဖေးမှာ သုံးတဲ့ networking စနစ်ကဘာတွေကြောင်နေမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်....
စတင်တပ်ဆင်တုန်းကတော့ သုံးရတာအဆင်ပြေနေပြီး ၁ပတ်လောက်ကြာတော့ server မှာဘဲ အလုပ်လုပ်နေပြီး ကျန်တဲ့ စက်တွေကိုနက်မရတော့တာဘဲဖြစ်နေပါတယ်...
ကြိုးတွေကိုလဲ သေချာစစ်ပြီးပါပြီ... စက်ကိုလဲ window ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်
ကျွန်တော်က MPT ကနေ ADSL 256MB ဘဲ ရထားပါသေးတယ်... မြန်နှုန်းတော့တိုးထားဆဲပါ
ကျွန်တော်ဆင်ခဲ့တဲ့ ပုံစံကတော့ မိုဒမ်ကနေ netgear အမျိုးအစား router ထဲကိုထည့်တယ် အဲကြိူးကိုတော့ Lan ကြိုးလို့ အမည်ပေးထားပြီး .. အဲကနေserver စက်ထဲကိုထည့်တယ်... နောက်စက်ရဲ့ အပေါက်တခုကနေ lan2ကြိုးနဲ့ 16 port ကိုသွားထားပါတယ်... အဲကနေမှကျန်တဲ့ စက်တွေကိုသွားပါတယ်...
အဲလိုဆင်လိုက်တော့ စစချင်းမှာတော့အိုကေနေပြီး နောက်ကျတော့ server မှာဘဲ သုံးလို့ ၇နေပြီး .... ကျန်တဲ့ စက်တွေမှာနက်သုံးလို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေပါတယ်
ကြိုးကြောင့်လဲ မဟုတ်တော့လောက်ပါဘူး... ကြိုးလဲ စစ်ပြီးပါပြီ.... server ဘဲကြောင်နေလို့လားဆိုပြီး စက်ကိုလဲ window ပြန်တင်ကြည့်ပြီးပါပြီ
အခု အဲလိုဆင်တာမရလို့ sharing နည်းနဲ့ ဘဲ ပြန်ထားထားနေရပါတယ်
အဲတာကတော့ မိုဒမ်ကနေ router ကိုသွားပြီး အဲကနေ 16 port ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်
အဲလိုလုပ်တော့မှဘဲ စက်အားလုံးမှာ နက်သုံးလို့ ၇နေပါတော့တယ်....
ဆိုင်သုံးအနေနဲ့ ပြန်ထားပြီး သုံးချင်ပါတယ်... ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတာလေးကိုသိချင်နေပါတယ်... ဖြစ်နိုင်ရင် အစအဆုံးပြောပြပေးစေလိုပါတယ်
ဖြစ်နိုင်တာကအစ်ကိုနောက်ထပ်ထည့်တဲ့စက်ရဲ့ network card မကောင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်..network card ကိုပြောင်းသုံး
ဆိုင်နံမည်ကို စုစံ လို့ပေးထားပါတယ်... တောင်ကြီးကပါ ....
network card ကြောင်တာပေါ့နော်.... အင်း ... အဲစက်ရဲ့ lan ကဒ်တခုက အရင်ထဲကရှိပြီးသားတခုပါ... နောက်တခုက အသစ်တပ်ထားတာပါ
အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း ကျွမ်းကျင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီ Mz မှာ ဆောင်းပါး ကောင်းကောင်း Thread တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။
အောက်က link မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။တစုံတရာ တော့ ပညာရမှာပါ။
မအိအိသိချင်တာက ဘာ software နဲ့Internet share တာလဲ အဖြစ်နိုင်ဆုံးက software ကြောင့် ပါ။ Wingate ဆိုရင် expire ခန ခန ဖြစ်တတ်တယ်။ Winroute ဒါမှမဟုတ် CCproxy
သုံးကြည့်ပါ ရပါလိမ်မယ်၊ ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ လာလုပ်ပေးချင်ပါတယ် တောင်ကြီးကဆိုတော့ သိပ်ေ၀းတယ်
khinezaw wrote: »
Server မှာ IP2ခုရှိမှာပေါ့ ။ Lan2ရဲ့ IP က တခြားစက်တွေရဲ့ Default Gateway ဖြစ်ရပါမယ်။ တခြားစက်တွေက Server ရဲ့ LAN2 IP ကို ping လို့ ရရပါမယ်။ Server နဲ့ Client တလုံးလုံးရဲ့ ipconfig /all result လေးများပြနိုင်မလားခင်ဗျာ ? ဒီမှာမတင်ပဲ PM ပို့လဲရပါတယ်။
server တင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ server administration ကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်
server ကနေ ip ဘယ်လောက်နဲ့ခွဲထားလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်
အဲဒီip ကို client စက်ကနေ ping လုပ်ကြည့်ပါ ping မသွားရင်တော့ server မှာပြင်ရမှာတွေရှိတယ် ဒီတိုင်းပြောပြဖို့ကမလွယ်ဘူး နောက်တစ်ခုက ကဒ်ပျက်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ping မသွားဘူးဆိုရင်ပေါ့ ကြိုးကြောင့်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ping ရတယ်ဆိုရင်လဲ server မှာ ပြင်ရမှာတွေရှိပါတယ် windows 2003 server တင်ထားတာလား dhcp ပေးထားလား dns နဲ့သွားတာလားဆိုတာလဲရှိသေးတယ်
အဲဒါကြောင့် server ကိုလေ့လာဖို့ link ပေးလိုက်ပါတယ် pdf file တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ပီးလေ့လာပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်
A Sin Pyay thwer p lar ma thi buu norr.........
အကိုရေ...ကျွန်တော် ပြောကြည့်မယ်နော်.. အကိုက MPT ကယူထားတယ် ဆိုတော့ Modem ကနေ ထွက် ပြီးတော့ Router ဆီ တစ်ခါ သွား သေးတယ် ပြ၊ီးမှ Server က နေ Lan2 ကိုသွား အဲကနေမှ Switch ကို သွားတယ် ဆိုတော့ အဆင့်တွေ က များ မနေဘူး လား ဗျာ... Modem ကနေ ထွက်ပြီးတော့ Router မသုံးပဲ Server ကနေမှ Switch ကို သွား ရင် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား.. ကျွန်တော် အထင်တော့ Router သုံးထား ရင် Server မလိုလောက်တော့ဘူးထင်တာ ပဲ...ဒါ မှ မဟုတ် Server သုံးထားတယ် ဆိုရင်တော့ Router မလိုလောက်တော့ဘူးလို့ ထင်တာ ပဲ... တစ်ခု ထည်း နဲ့ သုံး ကြည့်ပါလား bro ရယ်..... အဆင်ပြေ လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ.်. ကျွန်တော် တို့ လည်း MPT က ယူထား တာ ပါ Router မသုံးတော့ ပါဘူး Modem က နေ Server ဆီကို တန်း သွားထားတာ ပါ .. အဲဒီကနေမှ Switch က နေမှ.. client တွေ ကို ပေးသုံး ထား တာ တော်တော် လေး ဆင်ပြေ နေပါတယ်.. ဒီထက် ပိုကြွမ်းကျင် တဲ့ MZ က ကိုကို မမ တွေ က နေ ဆက် ပြီးတော့် ပြော ပြပါလိမ့်မယ်...
ကျွန်တော် ပြောလိုကမတာ အမှားပါ ရင် လည်း .......ခွင့် လွှတ် ပေး ကြနော်... :68::68:
တစ်ကယ်ပြောတာလား မအိအိ ..... ဟိဟိ
...ပြီးတော့လေ တစ်ခုသိချင်သေးတယ်ဗျ ...window7့မှာ network ကနေပြီးတော့ file တွေကို share ပေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ ...ဘယ်လိုလုပ်ရင် ရနိုင်မလဲဟင် ...
အနော်ကတော ့..network နဲ ့ပတ်သတ်ပြီး..သိပ်မသိလို ့ပါ...
Private cam နဲ ့ပတ်သတ်လို ့ကတော ့...Fix private cam ဆိုတာရှိပါတယ်..
MZ မှာ ရှာကြည် ့ပါနော်.....AVG 2007 လည်း သတ်တယ်အကို...
Norton 2009 လည်းကောင်းတယ်လို ့....ကြားပါတယ်..
ကို ခိုင်ဇော် အခုဆင်ထားတဲ့ ပုံက ဒီလိုလား
(၁) Internet <->DSL Modem <-> Router <-> Switch <-> CLients
အဲဒါကတော့ router နဲ့ သုံးတဲ့ ပုံစံအမှန်ပဲဗျ
အဓိကလုပ်ပေးရမှာက router ရဲ့ password ကို ပြောင်းလဲပြီးခိုင်ခိုင်မာမာပေးဖို့နဲ့
MPT ISP ရဲ့ login password ကို လည်း ခိုင်ခိုင်မာမာထားဖို့ပါပဲ မဟုတ်ရင် ကြိုက်တဲ့ client ကနေ router, ISP Login ကို လှမ်း access လုပ်နိုင်နေလို့ပါပဲ
(၂) Internet <->DSL Modem <-> Router <-> Server <-> Switch <-> CLients
ဒါကတော့ အကို ပထမဆုံးဆင်တဲ့ ပုံစံဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်
ဆိုရင်တော့ proxy software တစ်ခုခု (သို့) connection sharing လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်
ဒါပေမယ့် ပြဿနာက routing နှစ်ဆင့် ခံသွားတဲ့အတွက် ရှုပ်ထွေးသွားမယ်လို့ထင်တယ်(ကျနော့်အမြင်)
အကောင်းဆုံးကတော့ router သုံးချင်တယ်ဆို အပေါ်ဆုံးကအတိုင်းပဲလုပ်ပါ။
ဆာဗာ ထိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ router မသုံးပါနဲ့
Internet <->DSL Modem <->Server (ISA/Squid/CCproxy/Wingate)<-> Switch <-> CLients
server မှာ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ proxy software တစ်ခုတင်ပြီးသုံးပေးရပါမယ်
xp ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CCProxy ကအဆင်ပြေပါတယ်
ISA 2006 တင်မယ်ဆိုရင်တော့ microsoft windows server 2003 sp1 တင်ပေးရပါမယ်
Squid ကတော့ windows မှာရော linux မှာပါအလုပ်လုပ်ပါတယ် Linux မှာပိုကောင်းတယ်လို့သိရပါတယ်